Wax ka baro Suldaankii ugu danbeeyay ee Carabka ahaa ee maamuli jiray Afrika? | Qaran News
Writen by Qaran News | 1:08 pm 29th Sep, 2020
Jamshiid Bin Cabdullaahi Al said
Kaddib muddo 56 sano uu dibad joog ku ahaa dalka Britain Jamshiid Bin Cabdullaahi Al Said oo ahaa suldaankii ugu dambeeyay ee kasoo jeeday dalka Cuman ee ka arrimiyo jasiiradda Zanzibar ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Muscat ee caasimadda Cumaan.
Wuxuu kamid ahaa saldanaddii Cumaan ee 91 sano ka talin jirtay Zanzibar, waxaana xilka laga tuuray bishii Jannaayo ee sanadkii 1964-tii.
Wargeyska The Guardian ayaa ku warramay in dowladda Cumaan ay marar badan diiday codsi uga yimid suldaanka oo ahaa in dib uu ugu soo laabto dalka.
Balse qaar kamid ah qoyskiisa oo ku sugan magaalada Muscat ayaa warbaahin uu fadhigeedu yahay Abu Dhabi u sheegay in suldaanka uu codsaday in noloshiisa inta ka dhiman uu ku qaato dalkii uu kasoo jeeday ee Cumaan.
Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo arrintani, sida uu ku warramayo wargeyska The Guardian.
Gobanimo doonkii iyo kacdoonkii dhiigga ku daatay
Jamshid bin Cabdullaahi wuxuu dhashay 16-kii bishii September sanadkii 1969-kii, wuxuu noqday suldaankii Zanzibar markii uu geeriyooday aabihiis Cabdullaahi bin Khaliifa bishii July ee sanadkii 1963-dii.
Bishii Disembar sanadkii 1963-dii, jasiiradda Zanzibar waxay xornimadeeda ka qaadatay Britain.
Bil kaddib sanadkii 1964-tii, Afrikaanka waxay xilka ka tuureen maamulkii carabta ahaa ee ka talinayay Afrika.
John Okello ninkii garwadeenka ka ahaa kacdoonkii xilka looga tuuray suldaanka
Waxaa kacdoonka ka dhanka suldaankan ku lug lahaa 600 rag oo hubeysan kuwaas oo ka amar qaadanayay John Okello, oo isagu taageero ka helayay bulshada Afrikaanka, sida ay ku warrantay Encyclopedia Britannica.
Waxaana la xasuuqay kumanaan qof oo carab ahaa halka kumanaan kale ay isaga qaxeen jasiiradda Zanzibar iyo Pemba ee dalka Tanzania.
Wixii ka dambeeyay kacdoonkaas, madaxweyneyaashii Zanzibar iyo Tanganyika oo haatan ah Tanzania waxay kala saxeexdeen heshiis Zanzabir looga dhigayo maamul goboleed.
Muddadii uu dibad jooga ahaa
Jamshid bin Cabdullaahi wuxuu isaga cararay qasrigii saldanadda ee ku yaallay Zanzibar kaddib markii ay halkaas la wareegeen koox fallaago ah.
Markii loo diiday in magangelyo laga siiyo Cumaan, wuxuu aaday dhinaca Britain isaga iyo 61 qof oo ka tirsan qoyskiisa iyo ehelkiisa.
Labo toddobaad uun kaddib wargeyska New York Times ayaa ku warramay in dhibaato dhaqaale oo heysatay suldaanka ay ku qasabtay in uu isaga guuro huuteel lagu raaxeysto oo uu ka deganaa Britain gaar ahaan meel u dhaw Buckingham Palace.
Suldaan Jamshid bin Cabdullaahi iyo qoyskiisa
Wargeyska ayaa bishii May sanadkii 1964-tii ku warramay in dowladda Britain ay lacago boqolaal Gini ah siisay suldaanka.
Waxay arrintaas u suurogelisay in ku noolaado goob degan oo xeeb ah oo ku taalla Britain.
Sanadkii 2000, madaxweynihii hore ee Zanzibar ,Salmin Amor wuxuu cafis u fidiyay suldaan Jamshid bin Cabdullaahi.